2 Juni - 15 Juni 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
IZINHLELO ZOKULUNGISA IDOLOBHA ISIKHUMULO SEMIKHUMBI ESISHA KUVULWE IZIKHUNGO EZINOMLANDO
SILINDILE MALULEKA IMEYA yeTheku uZandile Gumede isimemezele ukuthi osonkontileka abancane bazohlomula ezinhlelweni zokuguqula isimo somnotho ngokwamaphrojekthi kaMasipala okufaka ugesi. IMeya uGumede ihole ithimba lezikhulu ebeliya eSpringfield Electricity Training Centre mhlaka 29 Meyi beyohlangana nosonkontileka bakagesi abancane. Ithe uMasipala uzotshela osonkontileka abakhulu ukuthi ibaphi osonkontileka abancane abazosebenza ngamaphrojekthi ngokuxhumana neziphathimandla ezithintekayo. Lena kuzoba yindlela ehlukile engafani nale endala, lapho ukuqokwa kosonkontileka abancane kwakuwumsebenzi kosonkontileka abakhulu. UMasipala uzosungula isigcina mniningwane (database) sosonkontileka bakagesi abancane ukuze uqinisekise ukuthi bathola uqeqesho olufanele ukuze bakhule futhi bathuthuke. Lolu hlelo luzolekelela ngokuqeda ukushoda kwamathuba emsebenzi, ukungalingani kanye nendlala. Ithimba eliphuma oPhikweni lukaGesi kwaMasipala, kwa-Supply IMeya uZandile Gumede emi nosonkontileka abancane bakagesi abebejabule kakhulu emva kokutshelwa ngesigcina mniningwane (database) esizokwenza ukuthi uMasipala ubazi ngokusemthethweni.
Osonkontileka abancane bazohlumula ezinhlelweni zokuthuthukisa umnotho
Chain Management Unit, kwa-Business Support, kanye nasoPhikweni lezokuVakasha kanye nokuKhangisa lisungulelwe ukuqinisekisa ukuthuthukiswa kanye nokuqeqeshwa kosonkontileka abancane. Umsebenzi waleli thimba kuzoba ukuhlela kanye nokuqhuba uqeqesho ukuze bonke abasebenzi bathole amakhono afanele. IMeya uGumede ithe ngesikhathi kusewumsebenzi wosonkontileka abakhulu ukuqoka osonkontileka abancane, bekuphazamiseka ukukhula kosonkontileka abancane. ?Obekuyinkinga ngokusebenzisa le ndlela endala ukuthi abanye abantu bebesebenza njengosonkontileka abancane iminyaka eminingi. Bekuze kwenzeke ukuthi amaphrojekthi abekelwa osonkontileka abakhethekile. Lokhu bekungekuhle neze,? kusho iMeya. Ichaza ngalolu hlelo, iMeya uGumede ithe balusungule emva kokukhathazeka ngokushoda kwezindlela eziqinile zokuthuthukisa umnotho emiphakathini yaseThekwini. ?Okuyinkinga kakhulu ukuthi abahlali abahlomuli kula maphrojekthi okuthuthukisa ingqalasizinda aqhubekayo emawadini abo. Lokhu sekuholele ekutheni sikhule isibalo samaqembu aphazamisa ukuqhubeka komsebenzi ezingxenyeni eziningi zika- Masipala,? kusho iMeya. ROMITA HANUMAN UMASIPALA weTheku uzimisele ngokuphuthumisa ukuhambisa izidingo zomphakathi, lokhu kuvele emhlanganweni wesabelomali sika R45 billion sonyakamali ka 2017/18 esiphasiswe isiGungu esiPhezulu soMkhandlu mhlaka 31 Meyi. Isabelomali sonyakamali ka 2017/18 siqukethe imali engango R37.5 bn yokuqhuba izinhlelo zentuthuko kanye no R7.5bn yotshalomali. Yethula isabelomali, iMeya yeTheku uZandile Gumede ithe: ?Lesi sabelomali sizobhekana ngqo nendlala, ukushoda kwamathuba emisebenzi, ukungalingani, kanye nokuhamba kancane kwentuthuko. Sizophinde sibhekane nezinkinga ezihlupha abantu bethu abahlala emalokishini, ezindaweni zasemakhaya, emahositela, emijondolo kanye nalabo abangenawo amakhaya.? Ngenhloso yokufezekisa isethembiso eyasenza ngesikhathi igcotshwa ngo-Agasti wangonyaka IPhini leMenenja yeDolobha yezeziMali uKrish Kumar, iMeya uZandile Gumede, iMenenja yeDolobha uSipho Nzuza kanye neNhloko yakwa-Expenditure uSandile Mnguni bejabule emuva kokuba isiGungu esiPhezulu soMkhandlu siphasise isabelomali sika R45 billion sonyakamali ka 2017/18 mhlaka 31 Meyi. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE
Siphasisiwe isabelomali sika R45bn
owedlule, iMeya uGumede kanye namaKhansela bathathe izinhlelo zesabelomali kanye nezeNtuthuko eDidiyelwe (IDP) bazihambisa emiphakathini ukuze baxoxisane ngazo. Imihlangano yesabelomali isingathwe emawadini awu 110, kwaphinde futhi kwasingathwa imihlangano yesifunda eyisithupha kanye nemihlangano nosomabhizinisi, abaholi bomdabu kanye nezinye iziphathimandla. ?Ngokusingatha le mihlangano sikwazile ukulalela izikhalazo kanye nezidingo zabahlali, futhi sikwazile nokwenyusa inani lemali lisuka ku R266 million laze lafinyelela ku R990 million ngokusebenzisa uhlelo lweMedium Term Revenue Expenditure Framework,? kusho iMeya uGumede. Le mali izosetshenziselwa ukwakha izinto ezifana namabhuloho abantu abahamba ngezinyawo, amarobhothi, izindlela, imigwaqo kanye nezinye izinkinga, ikakhulukazi kulezi zindawo ezingakathuthuki. IMeya uGumede iphinde yathi isabelomali sika 2017/18 siyindlela ebalulekile yokuqhuba izinhlelo zokuguqula isimo somnotho. Uhlelo lokuguqula isimo somnotho lwakhiwe phezu kwezisekelo ezimbili. Esokuqala esokukhulisa kanye nokuthuthukisa umnotho ngokusebenzisa imikhiqizo yethu. Esesibili esokuhambisa izidingongqangi, izindlu kanye nezidingo zomphakathi kwabamabhizinisi kanye nasemphakathini yabentulayo. Inhloso yalokhu ukuguqula isimo somnotho kanye nokuthuthukisa wonke umuntu.? Yize isabelomali sisungulwe ngaphansi kwezimo ezinzima, kodwa amanani enyuswe ngendlela yokuthi abahlali bazokwazi ukuwakhokhela. Ama-rates: 6.9% Ugesi: 1.88% Amanzi okuphuza: 15% Amanzi amabhizinisi:17% Ukuqoqwa kukadoti: 9.9% Ukuthuthwa kwendle: 9.9%
UMBUKISO WAMABHIZINISI WEZIFUNDA
KWAMNYANDU SHOPPING CENTRE Ngeminye Imininingwane: 031 311 4500